Teknolojia, Injenieria ary Zava-baovao Maro Mahatalanjona Hita Manamarika Ny Fanitarana Ny Lakandranon’i Panamà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2016 4:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, عربي, नेपाली, 日本語, Español
Lakandranon'i Panamà, sary ao amin'ny Flickr avy tamin'ny mpampiasa Jose Jiménez (CC BY-SA 2.0).
Ny 26 Jona 2016, andro izay nolazain'ny Filohan'i Panamà Juan Carlos Varela ho “manan-tantara ho an'ny firenena,” notokanana tao amin'ny renivohitra sy tany amin'ireo faritra maro, teo afovoan'ireo sainam-pirenena sy feon-kira nolalaovin'ireo mpianatra sy tarika maro, ny fanitarana ny Lakandranon'i Panamà ao amin'ny morontsiraka Panamaniàna Atlantika.
Làlana an-drano voatr'olombelona izay mampifandray ny Ranomasimbe Atlantika sy ny Ranomasimbe Pasifika, eo amin'ny Andilana tery indrindra ao Panamà, ny Lakandranon'i Panamà. Manana halava mitotaly 77 miles (eo amin'ny 142,5 km mahery eo) io ary notokanana voalohany tamin'ny 15 Aogositra 1914. Nandritra ny zato taona mahery, nampandeha haingana ny serasera ara-toekarena sy ara-barotra teo amin'ny faritra io làlana kely sy mora io. Nandaniana teo amin'ny folo taona teo ny famitàna ilay tetikasa vao nosokafana tsy ela akory izay.
Sambo voalohany izay nandeha tamin'ilay Lakandranon'i Panamà vao nitarina, ny sambo Shinoa Cosco Shipping Panama, izay manokatra ny serasera amin'ny làlana vaovao ao Agua Clara ao amin'ny riandranon'ny Atlantika.
Araka ny vohikala ofisialin'ny Lakandranon'i Panamà, tonga taorian'ny fandinihana sy famakafakàna lalina ny fanapahankevitra ny hanamboatra làlana fahatelo hfaneraseràna, ary mikendry ny hampitombo roa avo heny ny fahafahany miserasera io. Mampiseho ihany koa ny fivoaran'ilay fandaharanasa fanitarana, miaraka amin'ny tarehimarika sy ahitàna sary sy lahatsary, ilay vohikala.
Nandritra ny folo taona nanaovana ny asa fanitarana ny Lakandranon'i Panamà, maherin'ny 2.200 ireo zavatra arkeôlôjika hita ary nokilasiana, izay milaza ny tantara ara-barotr'ilay andilan'i Panamà hatramin'ny fotoana nialoha ny Kolombiàna:
Nilaza i Tomás Mendizábal, ilay lehilahy tomponandraikitra amin'ny fikilasiana ireo zavatra hita nandritra ireo dingana maro tamin'ny fanitarana, hoe: “hitako hafahafa, […] tsy nampino, ny hoe mandavaka ao aminà tanàna kely tavela ao anatin'ny ala mikitroky Panamà, ary mahita vokatra Eorôpeana miaraka amin'ireo asa-tànana avy any Meksika.”
Hatramin'ny taona 2014, nisy sasany tamin'ireo media teo an-toerana naneho ireo harena arkeôlôjika mahagaga izay nipoitra avy tao amin'ireo tendrombohitra nanesorana ny tany teo amin'ireo toerana niasàna:
Ny taona 2009, hita tao ihany koa ireo hatramin'ny taolanà nifin'ireo zavamanan'aina taloha Amerikàna Tanivo. Naneho hevitra toy izao i Jonathan Bloch, filohan'ny ekipan'ny Oniveriste-n'i Florida izay nanadihady ireo fahitàna ireo: